Aasaaska BET - Pine for BET
Guddiga Qiyaasta iyo Canshuurtu waa mid ka mid ah guddiyada aan si fiican loo fahmin ee magaaladeena. Halkan, waxaan wax yar ka iftiimin doonaa waxa ay tahay iyo waxay qabato.
S. Waa maxay BET?
J. BET-ka waa guddi ay dejisay Axdiga Magaalada. Hal dariiqo oo ay magaaladu ku daboosho kharashaadka lagu shaqaynayo laguna hagaajinayo adeegyada ku jira xudduuddeeda ayaa ah in la qaado canshuurta hantida (eeg hoos). Si kooban, duqa magaaladu wuxuu ku talinayaa miisaaniyad, golaha magaalada iyo guddiyada kala duwan waxay qaataan miisaaniyad ku salaysan taladaas. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aan la ansixin miisaaniyad kasta, BET waxay dejisaa canshuurta hantida ugu badan ee maaliyadaha qaarkood. Lacagahaas waxaa ka mid ah Magaalada, Guddiga Baarkadda, iyo Maamulka Guryaha Dadweynaha. BET waxay kaloo ansixisaa bixinta curaarta dawladda hoose (eeg hoos). Asal ahaan, BET waa guddi kormeer maaliyadeed.
BET waxay leedahay xubno saami ku leh dhinacyo badan oo ka mid ah canshuuraha canshuuraha magaalada iyo ilaha dakhliga, iyagoo hubinaya inaysan jirin hal dan ama wakiil oo si gaar ah u maamula arrimaha ku xiran awoodiisa.
S. Waa kuwee xubnaha BET?
J. “(1) Duqa; (2) guddoomiyaha Golaha; (3) xubin ka tirsan Golaha oo guddoomiye u ah guddiga Golaha oo mas’uuliyaddiisu ay ku jirto miisaaniyadda; (4) guddoomiye ay soo doorteen kana soo doorteen Guddiga Beerta iyo Madadaalada (ama, haddii Guddiga Beerta iyo Madadaalada aysan dooran guddoomiye, madaxweynaheeda); Iyo (5) laba xubnood oo ay doorteen cod -bixiyeyaashu doorasho joogto ah oo la qabto sannad kasta sannad ka dib oo tiradooduna ay afar u qaybsan tahay si siman. ” (Mpls. Ord No. 2016-086, § 5.)
Ama, haddii aad jeceshahay jaantusyada:
Sharax sida hantida canshuurta ay u shaqeyso?
J. Canshuurta hantida waxaa go’aamiya:
Go’aaminta inta la aruurinayo, kadibna
U-qoondaynta qaddarkaas si loogu ururiyo noocyada kala duwan ee guryaha, iyadoo la adeegsanayo miisaan-fasalka hantida oo lagu go’aamiyay qaynuun (“heerka kala-soocidda”). (Minn. Stat. § 273.13.)
Xeerka hantida waxay u dhigmaan noocyada kala duwan ee isticmaalka, sida degaanka, ganacsiga, iwm.
Canshuurta hantida qof ahaaneed waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la adeegsanayo qiimaha la qiimeeyay ee hantida marka loo eego guryaha kale ee ka jira xukunka, ka dib marka qiimahaas la habeeyo iyadoo la adeegsanayo heerka kala soocidda. Ku darista guryaha ku waajibtay canshuurta hantida (tusaale, ku -daridda unugyo degaan) waxay hoos u dhigtaa saamiga hantida kasta ee hantida guud ee canshuuraha guud maxaa yeelay isla canshuurtu waxay ku faafaysaa dad badan oo bixiya.
Marka la tixgelinaayo durdurrada dakhliga ee laga heli karo magaalada, canshuuraha hantida ayaa ah kuwa ugu yar ee dib u dhaca.( Eeg 2021 Daraasadda Dhacdooyinka Canshuurta Minnesota, bogga 33, 67)Ikhtiyaarka dib -u -dhigista canshuurta hantida oo loo adeegsan karo lacag -celintaas. (Tilmaamaha Waaxda Dakhliga ee Minnesota M1PR. – fayl garee M1PR -kaaga haddii aad u -qalanto!)Hab ahaan, canshuuraha guryuhu waxay u eg yihiin canshuur hanti marka loo eego mid kasta oo kale oo magaalada lagu heli karo.
Jaantuska bogga 67 ee Daraasadda Dhacdooyinka Canshuurta ee 2021. Waaxda Dakhligu waxay xustay “Sababtoo ah macluumaadka decile -ga ugu horreeya waxaa ku jira anomalies -ka xogta iyo dhibaatooyinka cabbirka… qiimaha canshuuraha ee wax -ku -oolka ah ee dekaalka koowaad ma aha mid la isku haleyn karo.”
Luqad cad, heerka canshuurta wax -ku -oolka ah ee canshuuraha hantida ayaa ku dhow guri siman, oo aad ugu dhow in loo siman yahay marka loo eego canshuuraha wax -iibinta oo leh canshuur wax -ku -ool ah oo sare u leh dadka dakhligoodu hooseeyo.
S. Ma sharxi kartaa waxa dammaanadda dawladda hoose tahay?
J. Dammaanadda dawladda hoose waa dawladdu ka amaahanayso dakhli mustaqbalka si ay u bixiso maalgelinta baahiyaha hadda jira. Waxay yihiin maalgashiyo faa iido u leh canshuurta waxaana guud ahaan loo arkaa maalgashiyo la isku hallayn karo oo ammaan ah, taasoo ka dhigaysa inay soo jiitaan maalgashadayaasha.
Qiimaha isku -xidhka Magaalada waxaa go’aamiya suuqa debaajiga waqtiga la soo saarayo, oo ay weheliso khidmadaha soo -saarista. Suuqa waxaa saameeya arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha ballaaran iyo qiimeynta dammaanadda magaalada, taas oo ah cabbir shaqsiyeed oo ka tarjumaya macluumaadyo kala duwan oo ku saabsan caafimaadka maaliyadeed ee guud ee magaalada, oo macno ahaan ah dhibcaha deynta dowladda hoose. Marka loo eego EMMA, dammaanadaha guud ee Minneapolis ee 2020 waxaa lagu qiimeeyay AA+ Fitch, iyo AAA S&P. (Helitaanka Suuqa Degmada ee Elektarooniga ah.) Guud ahaan, curaarta hoose ee degmadu waxay u oggolaanaysaa magaalada inay ku amaahato qiimayaal ka hooseeya suuqa si loo helo deyn ganacsi oo la mid ah.